Fomba fanamboarana - Jiangxi Lotte Garments Co., Ltd.
Ny tetik'asa rehetra dia manomboka amin'ny fanenomana materialy sy fampidirana solosaina, izay hisafidiananay ny lamba tsara indrindra hampivelarana ny vokatrao. Amin'ity dingana ity dia dinihinay daholo ny pitsopitsony mba hahazoana antoka fa:
Ny atiny sy ny lanjan'ny fitaovana no tadiavinay.
Tsy misy tasy, lesoka ary tsy fitovian'ny loko amin'ny lamba.
Tsy mihena ny fitaovana na mihalefy.
Ny fanapahana dia iray amin'ireo dingana lehibe indrindra amin'ny fanaovana akanjo, izay ivoahan'ny fombanao tsara indrindra.
Aorian'ny fisafidianana lamba, ny mpiasa dia hanamboatra ny entanao miorina amin'ny habeny sy ny endriny nofidinao tamin'ny alàlan'ny fitaovana manual sy automatique samihafa, hiantohana fa manana kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifanao ny tsirairay.
Rehefa vita ny dingana fanapahana dia efa ho teraka ny entanao.
Mandritra io fizotran-javatra io, ny mpiasanay dia hametraka ny akanjo amin'ny andiana masinina mba hanovana ny volavolanao.
Famaranana ny vokatra
Vita ny entanao tamin'ity dingana ity, izay handinihan'ireo mpiasanay efa za-draharaha tsara ny sanganasa tsirairay, hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny zavatra takiana aminao ny endriny, ny habeny ary ny sisa.
Nandalo ny fanamarinana nataontsika, esorinay ny ketrona ary apetrakay amin'ny dingana manaraka.
Mba hisorohana ny triatra mandritra ny fandefasana azy dia fonosinay tsirairay avy eo ny fonosinay ary apetaka amin'ny fonosana voatondro tsirairay.
Ankoatr'izay, Glamour dia manolotra safidy malalaka ho an'ny fandefasana, izay hamahana ny zavatra takinao.